Somaliland: Murrashaxa KULMIYE iyo Wefti uu Hoggaaminayo oo Booqday Deegaanka Karin Daallo - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Murrashaxa KULMIYE iyo Wefti uu Hoggaaminayo oo Booqday Deegaanka Karin Daallo
Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE, ahna murrashaxa madaxweyne ee xisbiga Md. Muuse Biixi Cabdi iyo wefti uu hoggaaminayo, ayaa si ballaadhan loogu soo dhaweeyey deegaanka Karin Daallo oo ku taalla duleedka waqooyi galbeed ee magaalada Ceerigaabo oo ay maanta booqasho ku tageen.
Murrashaxa oo ay wehelinayaan wasiirro, siyaasiyiin, salaadiin, cuqaal iyo xubno kale, ayaa waxa halkaas kusoo dhaweeyey dadweynaha deegaankaas ku dhaqan oo muujiyey taageerada luxdan ee ay u hayaan xisbul-xaakimka KULMIYE iyo murrashixiisaba.
Haldoorka, waxgaradka, siyaasiyiinta iyo cuqaasha deegaanka Karin Daallo oo hadallo ka jeediyey madal fagaare ah oo shacabka lagala hadlay, ayaa murrashax Muuse Biixi iyo weftiga uu hoggaaminayo si weyn ugu ammaanay booqashadooda, waxana ay soo bandhigeen waxtarka xukuumadda KULMIYE ka hirgelisay guud ahaanba gobolka Sanaag, iyaga oo sidoo kalena codsaday in wax lagala qabto dibu-dhacyo kooban oo deegaankaas ka jira.
Wasiirrada wasaaradaha Qorshaynta qaranka, Biyaha iyo wasiiru-dawleyaasha wasaaradaha Caafimaadka iyo Ganacsiga oo halkaas ka hadlay, ayaa iyaguna si hufan ugu mahadceliyey shacabka deegaanka Karin ee sida sharafta leh usoo dhaweeyey, waxana ay ballan ku qaadeen inay xukuumad ahaan wixii karaankooda ah ka qaban doonaan baahiyaha ka jira deegaanka Karin.
Af-hayeenka xisbiga KULMIYE Md. Xasan Maxamed Cali (Gaafaadhi) iyo siyaasiyiin ay kamid yihiin Cali Maxamed Waran-cadde iyo Xuseen Cali Ducaale (Cawil) iyo xubno kale oo siyaasiyiin ah oo halkaas ka hadlay, ayaa shacabka deegaanka Karin uga mahadceliyey soo dhaweyntooda iyo taageerada ay u muujiyeen xisbiga KULMIYE iyo murrashaxiisa.
Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi oo halkaas ka hadlay, ayaa isaguna shacabka deegaanka Karin uga mahadnaqay sida milgaha leh ee ay usoo dhaweeyeen iyo taageerada ay u muujiyeen.
Somaliland: “Cabdiraxmaan Cirro ha kala Doorto Musharaxnimada iyo Guddoomiyaha Golaha wakiilada”Xisbiga Kulmiye